Inqanaba lokuseta isitayile saseSaudi! Ingqondo ye1000 + yeNgcali yokuqhubela phambili kwiindlela ezintsha zoKhenketho lweHlabathi
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Inqanaba lokuseta isitayile saseSaudi! Ingqondo ye1000 + yeNgcali yokuqhubela phambili kwiindlela ezintsha zoKhenketho lweHlabathi
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • Utyalo mali • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Iindaba zaseSaudi Arabia zokuPhula • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Tyala imali kuLuntu, isenzo kunye neziphumo zezona zinto ziphambili zibekwe ngu-Mphathiswa Wezokhenketho wase-Saudi Arabia kwihlabathi liphela. ISaudi Arabia imeme i-1000 + kwezona nkokeli ziqaqambileyo nezona zinempembelelo kwezayo kwikamva elizayo lotyalo-mali kwi-KAICC eRiyadh, nge-Okthobha 26-28.
Ikamva loLingelo loTyalo-mali lusekwe eRiyadh kunye neeofisi ezikwezinye iindawo zehlabathi.
I-26-28 ye-Okthobha, i-2021 sisiganeko sokukhumbula isikhumbuzo sesi-5 esithi "Invest in Humanity" kwindawo leyo Ihotele iRitz-Carlton kunye neZiko leNkomfa yaMazwe ngaMazwe yaseKing Abdulaziz (KAICC) eRiyadh eSaudi Arabia
ISebe lezoKhenketho laseSaudi Arabia lamema iinkokheli zokhenketho ezingama-1000 +, kubandakanya nabaphathiswa bezokhenketho kwihlabathi liphela, ukuba babeke inqanaba lokuvuselelwa kwezokhenketho kwihlabathi liphela, utyalomali kunye nokusebenza.
I-Saudi Arabia iphuma yonke, kwaye njengoko kubonisiwe amaxesha amaninzi ngexesha le-COVID-19, uMphathiswa wezoKhenketho kuBukumkani u-Ahmed Ahmed-Khateeb ngoku wongeze ixesha lokhenketho kwingxoxo. Umeme iinkokheli zokhenketho ezili-1000 + ezivela kumacandelo oluntu nawabucala kumnyhadala ozayo we-FII eRiyadh.
Ngayo yonke imigangatho, i-FII iguqukile kwingxoxo “yoTyalo-mali kuBuntu” yaya kwi-trendsetter egcwele isenzo-sokuhamba kukhenketho lwehlabathi kunye nokubuyiselwa kukhenketho.
Ngomhla we-26 kuCanzibe, 2021, lo Mphathiswa mnye wase-Saudi wahambisa umbono wakhe kukhenketho lwehlabathi, xa wabamba iNgqungquthela yokuBuyisa uKhenketho yi-World Tourism Organisation (UNWTO)
Kwiinyanga ezi-6 kamva kubonakala ukuba uZurab Pololikashvili, uNobhala-Jikelele we-UNWTO ubona i-FII eRiyadh ngakumbi njengokhuphiswano kwaye yabiza i-UNWTO World Tourism Congress e-Barcelona iphikisana ngqo nemihla ebekwe yi-FII eRiyadh.
ThIcebo elifanayo lasetyenziswa xa i-UNWTO ilungiselela intlanganiso ephambili ngaxeshanye I-WTTC ibinengqungquthela yayo yomhlaba ngoMeyi eCancun, eMexico.
I-UNWTO iziphatha njengomntwana
eTurboNews ubuziwe ngo-Epreli ukuba oku kwenzelwe ukuba iNgqungquthela yeWTTC isilele? Ngaba i-UNWTO icwangcisa ukukhuphisana nenyathelo le-Saudi Arabia? Isiteyitimenti somhlaba siza kuthi: I-UNWTO iziphatha njengomntwana.
Umthunywa we-UNWTO kunye nomphathiswa owayemenyelwe e-Barcelona sele bexelele eTurboNews wayeya eSaudi Arabia.
Lithini iphulo lokutyala imali elizayo?
Iphulo loTyalo-mali lwexesha elizayo (FII) liqonga lehlabathi lengxoxo ekhokelwa yingcali phakathi kweenkokheli zehlabathi, abatyali mali, kunye nabaqambi abanamandla okulungisa ikamva lotyalo-mali lwehlabathi. Ugxininiso kukusebenzisa utyalomali ukuqhuba amathuba okukhula, ukwenza izinto ezintsha kunye neetekhnoloji eziphazamisayo, kunye nokusombulula imiceli mngeni kwilizwe jikelele.
IZiko leFII ligxile kwimimandla emihlanu:
Ngokukhokelela kwimizamo kunye nezixhobo eziya kwezi nkalo, i-FII ikholelwa ekubeni inokudala ifuthe elihle kuluntu.
CINGA, XCHANGE, UMTHETHO
IZiko le-FII lakhiwe kwiintsika ezintathu-CINGA, XCHANGE, UMTHETHO-apho silandela khona iinjongo zethu kwiziseko eziqinileyo ze-ESG. Insika ye-THINK ixhobisa iingqondo eziqaqambileyo zehlabathi ukuba zichonge ezona ndlela zilungileyo ziye kwikamva eliqaqambileyo.
Insika yeXCHANGE yenza amaqonga apho iingcali, izinto ezintsha, iinkokheli, kunye nabatyali zimali behlangana ukuze babelane ngolwazi kwaye basebenzisane kutshintsho. Okokugqibela, intsika ye-ACT ifuna kwaye ityale imali kubuchwephesha obutsha obuthembisayo kwizisombululo zehlabathi lokwenyani ezifanelekileyo.
Omnye umahluko kwiZiko le-FII kukunyanzeliswa kwemigaqo ye-ESG elinganayo njengendlela eya phambili kuzinzo lwehlabathi nakwikamva eliqaqambileyo. Sijonge ukwandisa ulwazi malunga nokuphucula ukumiliselwa kwemigangatho ye-ESG kunye nesithembiso sokulawula ngokuthembekileyo imisebenzi yethu yendalo esingqongileyo, yentlalo kunye neyolawulo ukuthobela le migaqo.
Umahluko ophambili we-FII Institute kunye namanye amanyathelo afanayo asebenzayo. I-FII ithatha iinzame eziqhutywa ngophando ngaphaya komgangatho oqhelekileyo ngokuthatha inyathelo ngotyalo-mali kwizisombululo ezijolise kwikamva, kwizisombululo zehlabathi lokwenyani.
I-FII yaziwa njengelizwi ekubizeni uluntu lwehlabathi ukuba luthathe inyathelo, lenze amaqonga apho izimvo zivuselelekileyo, kwaye kugcinwe utyalomali ukuze luzenze.
Isishwankathelo, ubume beZiko le-FII kukukhawulezisa nokwenza ukuba izimvo zisombulule eyona mingeni ingxamisekileyo ngobuchwephesha obuphezulu nobuzinzileyo.
Utyalomali oluzayo kuluntu luhlala luneeseshoni ezimbini zokhenketho ezidwelisiweyo:
Iposikhadi evela kwikamva, ukutyala imali kukhenketho oluzinzileyo.
Ukuhamba kweshishini kunye nokuzonwabisa kwilizwe elizinzileyo.
Ukongeza i-1000 + yeenkokheli zokhenketho kwingxoxo ye-FII, ishishini lokuhamba linethuba lokunxibelelana kunye namagumbi angasemva eenkokeli zokuhlangana njengawo nawuphi na umsitho ukusukela oko kwabakho ubhubhane.
IBhodi yeTrasti ye-FII:
UYE Yasir Al-Rumayyan
Irhuluneli PIF, Usihlalo Saudi Aramco Saudi Arabia
IHRH Princess Reema Bint Bandar
Ummeli we-KSA e-USA Saudi Arabia
U-Senator Matteo Renzi
I-Senator yase-Italiya yaseFlorence kunye ne-Nkulumbuso yase-Itali
U-Mohamed Mohamed Al Abbar
UMseki kunye noMlawuli oLawulayo kwiipropathi ze-EMAAR e-United Arab Emirates
UGqirha Peter H. Diamandis
UMseki weX-Prize Foundation kunye neYunivesithi yaseMelika eMelika
UNjingalwazi Tony Chan
UMongameli weYunivesithi yaseKing Abdullah yeSayensi kunye neThekhnoloji (KAUST)
UNjingalwazi woNyango ngamayeza, iYunivesithi yaseCalifornia (UCSD) eSaudi Arabia